အမြန်လမ်းတွင် ဒုရဲအုပ်တစ်ဦး လမ်းဖြတ်ကူးစဉ် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးနှင့် တိုက်မိသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား - Cele Platform
အမြန်လမ်းတွင် ဒုရဲအုပ်တစ်ဦး လမ်းဖြတ်ကူးစဉ် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးနှင့် တိုက်မိသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
အမြန်လမ်းတွင် ဒုရဲအုပ်တစ်ဦး လမ်းဖြတ်ကူးစဉ် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးနှင့် တိုက်မိသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ထံက သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇွန်လ(၉)ရက်နေ့ည(၁၀၃၀) နာရီချိန်တွင် ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် ၁၅၈ အနီး ရှိ စမိုးရဲကင်းမှ ဒုရဲအုပ်ထွန်းဝင်းသည်. လမ်းတစ်ဖက် နေပြည်တော်-ရန်ကုန် လမ်း. စုပေါင်း သန့်စင်ခန်းအနီးရှိ ဈေးဆိုင် မှ ထမင်းစားပြီးအပြန် လမ်း ဖြတ်ကူးလာစဉ် နေပြည်တော်-ရန်ကုန် သို့ ယာဉ်မောင်း ကိုချစ်ကိုကိုလွင် (၃၅) နှစ်- ရွှေပြည်သာနေသူ မောင်းနှင်လာသည့် Honda. FIT-2H/—. အနက်ရောင်ယာဉ် ဖြင့် တိုက်မိပြီး. ဖြစ်စဉ်နေရာတွင် ဒုရဲအုပ် ထွန်းဝင်း သေဆုံးသွားသဖြင့် အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဇီးပင်သာစခန်း မှတပ်ဖွဲ့ ဝင်များနှင့် အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ များ. ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် တာဝန် အပ အမြန်လမ်းမပေါ် ဖြတ်သန်း သွားလာသည့်. ဒုရဲအုပ် ထွန်းဝင်း အား အမြန်လမ်းမကြီး ဥပဒေ နှင့်အညီ အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းလည်း သိရသည်။ အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး
အမွနျလမျးတှငျ ဒုရဲအုပျတဈဦး လမျးဖွတျကူးစဉျ မျောတျောယာဉျတဈစီးနှငျ့ တိုကျမိသဆေုံးမှုဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး အမွနျလမျးမကွီး ရဲတပျဖှဲ့ထံက သတငျးရရှိသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ဇှနျလ(၉)ရကျနညေ့(၁၀၃၀) နာရီခြိနျတှငျ ရနျကုနျ-နပွေညျတျော အမွနျလမျး မိုငျတိုငျ ၁၅၈ အနီး ရှိ စမိုးရဲကငျးမှ ဒုရဲအုပျထှနျးဝငျးသညျ. လမျးတဈဖကျ နပွေညျတျော-ရနျကုနျ လမျး. စုပေါငျး သနျ့စငျခနျးအနီးရှိ စြေးဆိုငျ မှ ထမငျးစားပွီးအပွနျ လမျး ဖွတျကူးလာစဉျ နပွေညျတျော-ရနျကုနျ သို့ ယာဉျမောငျး ကိုခဈြကိုကိုလှငျ (၃၅) နှဈ- ရှပွေညျသာနသေူ မောငျးနှငျလာသညျ့ Honda. FIT-2H/—. အနကျရောငျယာဉျ ဖွငျ့ တိုကျမိပွီး. ဖွဈစဉျနရောတှငျ ဒုရဲအုပျ ထှနျးဝငျး သဆေုံးသှားသဖွငျ့ အမွနျလမျးမကွီးရဲတပျဖှဲ့ဇီးပငျသာစခနျး မှတပျဖှဲ့ ဝငျမြားနှငျ့ အထောကျအကူပွု အဖှဲ့ မြား. ကူညီဆောငျရှကျပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ ဖွဈစဉျကွောငျ့ တာဝနျ အပ အမွနျလမျးမပျေါ ဖွတျသနျး သှားလာသညျ့. ဒုရဲအုပျ ထှနျးဝငျး အား အမွနျလမျးမကွီး ဥပဒေ နှငျ့အညီ အမှုဖှငျ့ အရေးယူ ဆောငျရှကျထားကွောငျးလညျး သိရသညျ။ အမွနျလမျးမကွီးရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံး